Yeroo Oromoonni hedduun Finfinnee irraa Neftegna woliin dhiichisaa jiranitti Gariin keenya Du’aati jira. – Kichuu
[ March 8, 2021 ] Abiyyi jaarsummaa pre. Uhuru Kenyatta tti ergatee jira pre. Saahilawaarqin. Akka S.Suudaan fi Ertiraa ofii maalif hin deemne?? Videos
[ March 8, 2021 ] Pewter Spoon brings awareness to violence in Ethiopia World
[ March 8, 2021 ] Jailed Ethiopian opposition leaders to end hunger strike World
HomeAfaan OromooNewsYeroo Oromoonni hedduun Finfinnee irraa Neftegna woliin dhiichisaa jiranitti Gariin keenya Du’aati jira.
keenya Du’aati jira. 1. Koloneel Abiyi tokko jedhee kan hojii eegale Minilkin (bineensa habashaa) Oromoon marti akka diinaatti ilaalu innimmoo akka gootaatti faarsuudhaan ture. Kun dhuguma Oromoodhaa?
2. Itti dabalee jecha ‘sabboonummaan Oromoo’ ykn Oromo nationalism akka Oromoo xiqqeessetti ibsa kenne. Isaaf sabboonummaan Oromoo xiqqeenya tahee sabboonummaan Habashaa guddina ykn qaroomina ta’uu isaa ibsate. Kun dhuguma Oromoodhaa?
3. Seenaa Impaayera sanaa keessatti aangoodhuma sobaa kan Oromoo bakka hin buune ta’us anga’ooti biyya sana bulchan yoo hammenya dalagan illee Oromoo walumatti qeequ malee gandaan ykn naannoon gargar baasanii saba-himaaleetti bahanii hin dubbatan. Koloneel Abiyyi maqaa Oromoo waligalaan ‘aangoo’ sirna ceesisuutti galfata fudhatee, osoo ummati isa hin filatin ifatti bahee Oromoo gandaan qooduu eegale. Ragaa sobaa walitti qabee akka Oromoon Wallaggaa isa ajjeesuuf jedhuutti sobe. Kun dhuguma Oromoodhaa?
4. Bara qaroominaa kanatti soba adii kan ‘Helicopterri Dambi Dollotti polisii madaa’e fuudhuuf ergamee ummati bakka dirree buufata xiyyaaraa waan ciiseef Helicopterri bakka qubatu dhabee ofirra garagalee deebi’e’ jedhe. Akkaataa xiyyaarrii fi Helicopterrii itti ka’uu fi qubatu baruuf Bole airport ykn humna qilleensaa Bishoftuu deemee hin ilaaluu? Oromoon sobee nama araarsa malee sobee walitti hin naqu! Abiyyi dhuguma Oromoodhaa?
Mana barumsaa doofaan Wayyaanee (Idi Amin Dada) kun har’a xiyyaara habashaan balaliistuun gubsiise kana keessaa pilotota heeduu baaseera Oromoon!
Waan hundaafuu YAKKA WARAANAA haadha Oromoo humna hin qabnee fi daa’imman Oromoo irratti ergamtooti diinaa fi jala deemtoti habashaa raawwachaa jirtan galmaa’ee eessattuu, yoomiyyuu kan isin gaafachiisuu ta’uu hubadhaa!!!!!
Getaachoo Asaffaa Oromoo kolaasa ture. Yeroo sana Abiyyiifi Lammaan miseensa ‘deeninnetii’ biyyatti turan. Abiyyi akkana je’e: Wallaggaa keessa qabsoof yeroon ture uumanni Wallaggaa aannani na’obaasa ture je’e. Bishaan yoon gaaffe aannan naalacha ture jechaa ture.
1. Kanaafi uummata Wallaggaa waraana qilleensan deeggarameen xiyyitii obaasa?
2. Qabsoo maali gaggeessa ture Wallagga keessa? Oromoo irratti qabsaaha ture isuma amma itti jiru.
3. Qaama ‘deeninnetii’ turan lamaanu. Oromoo kolaasa ykn kolaasisaa turan jechuudha.
Duchattii jijjiiramni amma jiru maqaatu jijjiirame malee hojiin isuma duraati.
Meeshaan har’dha nutti dhukahu kun gaafa ilmoo ajjeessanii haadha irraa teechisan Gaafa Akkasitti dhiitamnee tumamnee ajjeefamnee maal nurra eega ture. dhageeffadhaa
Amassi Sanumaa Oromodhafi
Godina Harargee Lixaa Aanaa Mi’eeysoo Araddoota akka Qiqilliftuu fii Waltaanetti hidhannoo gurguddoon Hawaasa keenya irratti dhukaasaati jiran. Lolli kuniis hanga ammaatti itti fufeeti jira.
Namoonni madaahaniis ni jiran, Namoota madaahan keeysaa Kan ammaaf Maqaan na gehe Muhaammad Abdii ja’ama. Hanga ammaatti gargaarsi gama Mootummaatiin Hawaasa kanaaf godhame tokkolleen hin jiru.
Yeroo Oromoonni hedduun Finfinnee irraa dhiichisaa jiranitti Gariin keenya Du’aati jira. Qabeenyii fii Qa’een isaa Mancaafamaati jira. Halli kun hanga yoomitti laata kan itti fufu??
Ammaaf Bilbilliin nama achi irraa beekuu na dide Xiqqoo booda Yaaleen Odeeyfannoon argadheen isinitti deebi’a.
Kan Shubbisaa Jirtaniif Shubbisa gaarii,
Kan Lolli Irratti banamee Du’aa Jirtan immoo Rabbibi isin haa gargaaru, Nagayatti!!
“Raayyaan keenya magaalota godinoota Wallaggaa 4n keessa jiran guutummaatti to’ateera. Loltoonni ABO bosonatti baqatan. Torban tokko keessatti bosona keessaas ni baasna” jedhe Biraanuu Juulaa torban darbe VOA Amaarinyaa irratti dubbate. Har’a immoo warri saamamuu baankii WBOtti harkisan komaandi poostii WBOtu hoggana moo Baankiin bosona jiraa ree?
[SQ, Amajji 14,2019] Baargamoo fi Buna dabalatee lafa hektaara 5 ol gubatee barbaadaa’eera. Hanga nama du’ee beekuu baannus lakkoofsi wareegamtoota Oromoo hedduu ta’uu nuu gabaasan
“Kaleessa yeroo Maaster pilaanis falminee duuneerra, Yeroo Bosonni Baalee gubates uummata keenyaaf dirmatnee, Harargetti Oromoon buqqaanaan baanee falmineerra falmaas jirra, har’a yeroo du’aa jirrutti qaamni keenya Oromoon nuu dirmata jennee abdanna” jedhan jiraattoonni Qellem Wallaggaa Sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromoof yaada laataniin
Akka jiraattonni kun jedhanitti Elekoopterri waraana guyyoota sadan darbanii qabee hanga ammaatti boonbiin uummata rukutaa jira. Haleellaa kanaan hanga ammaa Baargamoo fi Buna dabalatee lafa Hektaara 5 ol irraa barbadaa’ee jira.
Bineensi Bosonaa hedduun keessa gubataniiru, manneen barnootaas gubatanii jiru. Qabeenyaan uummataa waraana mootummaatiin barbaadaa’aa jira. Lubbuun namaa dubartii waraana baqattee bosonatti deessee mucaa hoosiftu dabalatee darbee jiru addaan baafachuufillee uummatni danqamee jira. Sababaan ammallee waraanatu itti fufee jira. Elekoopteerri ammas uummatarra naannaa’aa jira. Manneen uummataa ammallee gubataa jiru. Kanaaf Uummata Oromootiin dhaamsa maaloo nuu dirmadhaa jedhuu dabarfataa jiru.
Dhimma kana ilaalchisuun jiraattota Qellem kanneen telefoonaan dubbifne sagalee isaanii qabannee sagantaa keenya guyyaa boriitiin Sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromoo irratti isin biraan geenya dhaggeeffadhaa!
Of eeggannoon haa jabaatu:
Naannoo Mogar Drone gargaaramanii quubsuma WBO basaasaa jiru.Of eeggannoon barbaachisaan haa fudhatamu.Drone xixiqqoo bobbaasanii halkanii guyyaa irratti hojjetaa jiru.Basaasa isaanii edda xumuratanii booda humna RIB haleellaa helikoptaraan deeggarame baay’inaan bobbaasuuf qophaawaa jiru.
Seenaa Impaayera Ethiopia keessatti H/Sillaasee ture uummata Oromoo Baalee kan xiyyaaraan reebe. Oromoo keessaa seenaan Oromoo cabsuutti Minilikii wajjin wal-ta’uun beekamu Goobanaa Daaceeti.
Har’a Oromoon seenaa haaraa galmeessisaa jira. Maqaa Oromoon Impaayera Ethiopia dulloomte haaressuuf jecha Oromummaa himachaa Oromoo xiyyaaraan tumuu fi biyya gubuutti Dr. Kol. Abiy Ahimed seenaa Oromoo keessatti bara baraan galmaa’ee taa’a.
Dr. Kol. Abiy Ahimed Oromoo Xiyyaaraan tumuu, gubuu, qabeenya Oromoo barbadeessuu, uummata tokko qe’ee fi lafa isaa irraa buqqisanii godaansisuutti isa jalqabaati. Seenaanis yoomuu hin hirraanfatu. Lubbuu Oromoota dhumaniif Waaqayyo haa iyyatuuf.
Eenyutu itti gaafatama?